ताजा अपडेट : कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी ! - jagritikhabar.com
ताजा अपडेट : कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी !
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार भएको दोस्रो चरणको मतदानमा शेखर कोइरालालाई ९०७ मतान्तरले पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुनिएका हुन् ।
दोस्रो चरणको मतदानमा ४ हजार ५६२ मत खसेको थियो र सभापतिमा निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात २२८२ मत चाहिन्थ्यो । देउवाले २७२४ मत पाए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कोइरालाले १८१७ मत पाएका छन् । ३३ मत भने बदर भएको छ ।